သင်္ကြန်အပြီးမှာ ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကိုဖွင့်ဖို့ကျိန်းသေနေပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီနေတိုး
7 Feb 2018 . 12:47 PM
အနုပညာလောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီနေတိုးက လက်ရှိရိုက်ကူးမယ့် “မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုမရိုက်ကူးခင်လုပ်သင့်တဲ့ Pre Production ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဖွင့်မယ့်အခြေအနေများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပရိသတ်တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးပါဦး…
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စတိုရီအရည်အချင်းရှိတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ပါ။ လက်ရှိအသက်ထက်ကို ၁၀ နှစ်လောက်ငယ်ရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောရရင် ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းမရှိဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တတ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။
၁၀ နှစ်လောက်ငယ်ရမယ့်ဇာတ်ကောင်ဆိုတော့ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကရော…
ပြင်ဆင်မှုတွေရှိတယ်။ ဆံပင်ပုံစံတွေ ပြောင်းရမယ်။ ၂၀၁၂ ဝန်းကျင်လောက်ပုံစံကို ပြန်သွားရမှာပေ့ါ။ အဓိက ဖေ့စ်ဘုတ်ကို မြန်မာပြည်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မသုံးသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ဇာတ်ကိုတည်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်ဒီဇိုင်းကအစ အားလုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတွေမှာ ကွာခြားမှုတွေရှိလား…
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု အရမ်းကြီးကွာဟနေတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အဓိကက ဒါရိုက်တာပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ယိုးဒယားဒါရိုက်တာနဲ့ရိုက်ရင် ယိုးဒယားမုလေးရှိမယ်။ မြန်မာဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့ရင် မြန်မာဆန်တဲ့မုလေးရှိမယ်။ တွေးမိတာတစ်ခုနဲ့ အတွေ့အကြုံအရပြောရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဒါရိုက်တာနဲ့ပဲရိုက်ရိုက်ပါ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို၊ တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ လုပ်ရတဲ့အိုက်တင်က မတူဘူး။ တူတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေ့ါ။ ရုပ်ရှင်က အိုက်တင်ကိုပိုပြီး စိတ်ထည့်ပြီးလုပ်ပြရတယ်။ စိတ်ထဲမရောက်ရင် လုပ်လို့မရဘူး။ ဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင် နည်းနည်းတော့ ကွာဟသွားတယ်။ ဒါတွေက နောက်ပိုင်းသတိထားမိတဲ့အချက်လေးတွေပါ။ ဒါရိုက်တာခိုင်းတဲ့နေရာမှာ မူတည်တယ်ပေ့ါ။
Pre Production လုပ်ကြတဲ့အပေါ်မှာ အစ်ကိုရဲ့အမြင်က ဘယ်လိုရှိလဲ…
အခုရိုက်ကူးမယ့်ဇာတ်ကားရဲ့ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကတော့ Pre Production ပိုင်းကို တစ်လလောက် အချိန်ယူပြီးလုပ်ရမယ်။ အမှန်ကတော့ သုံးလလောက်ယူရမှာပါ။ အခုကတော့ Pre Production ကို ၅ ရက် ၆ ရက်လောက်တော့ ယူနေကြပါပြီ။ ဈေးကွက်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တချို့လည်း Pre Production ကို လုပ်နေကြတာကို တွေ့နေရပါပြီ။ မလုပ်တဲ့သူတချို့လည်းရှိတယ်ပေ့ါ။ ပွဲတွေကသလိုပေါ့ ကိုယ်ပရိသတ်တွေရှေ့မှာကပြမယ့်အရာတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေး၊ အကြိမ်ကြိမ်သရုပ်ဆောင်ကြတာပေ့ါ။ အချိန်ကို အလကားမဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပေ့ါ။ Pre Production တွေလုပ်လာကြတဲ့အတွက်လည်း ပိုပြီးတိကျသေချာပြီး ဒါရိုက်တာလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ ရတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ ပြန်လည်းညှိလို့ရမယ်ပေ့ါ။ အဲဒီလိုလေးတွေ လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၈ က ၂၀၁၉ အတွက် သေချာတဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေထွက်လာမှာပါ။ Pre Production ကတော့ ကျွန်တော်တို့စပြီး လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အရင်ကတည်းက Pre Production ကိုပေးတယ်။ ဖလင်ခေတ်ကတည်းကပေ့ါ။ အဲဒီလိုတွေရိုက်လာခဲ့လို့လည်း ထွက်လာတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေက ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၊ ၇နှစ်လောက်ကတည်းက Pre Production တွေနဲ့ ယဉ်ပါးပြီးသား။ ဗီဒိယိုရဲ့အကျင့်တွေရှိနေသေးတဲ့ တချို့သရုပ်ဆောင်တွေလည်းရှိတယ်။ မလိုဘူးလို့ ထင်တာပေ့ါ။ အဓိကပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေဆီက အသံများများထွက်မှရမယ်။ Pre Production လုပ်လို့မရတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။ လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတာလည်း မရှိဘူးပေ့ါ။ အရှေ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ “တာတေကြီး” မှာလည်း အဝတ်အစားတွေက ရိုက်ခါနီးမှပြင်ဆင်တာ ဝတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ရိုက်မယ့်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေကို ကြိုမလုပ်ထားဘူးဆိုရင် ပရိသတ်တွေရှေ့ကို သေသေသပ်သပ်နဲ့ ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Pre Production နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခု ပရိသတ်တွေဆီကိုရောက်မယ်ပေ့ါ။ Pre Production လုပ်ရင် ပိုကောင်းနေတာသိပေမယ့်လည်း တချို့လိုက်မလုပ်သေးတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Pre Production ကို လုပ်ကြဖို့ ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ အလုပ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်အပေါ်မှာ သေသေချာချာလေး စေတနာထားစေချင်တယ်။
ဆင်ဆာကင်းလွတ်ခြင်း၊ ဆင်ဆာရှိခြင်းအပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ပေးချင်လဲ….
ဆင်ဆာဆိုတာက လွတ်လပ်မှုအပေါ်မှာ အသိတစ်ခုပေါ့။ ဆင်ဆာပေးခြင်းမပေးခြင်းမှာ အနုပညာကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်မှာ လုပ်ချင်တာနဲ့ မလုပ်ချင်တာပဲကွာတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုကို လူတန်းစားမျိုးစုံကိုဖတ်ခိုင်းမယ်။ မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေး၊ ကလေးအမျိုးစုံပေ့ါ အဲဒီမှာ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လာမလဲ။ အဓိကက အဲဒါပါပဲ။ အဲဒီလိုဖတ်ကြည့်လို့ အားလုံးကလက်ခံတယ်။ အဲဒီမှာမှ ဆင်ဆာကဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလေးလူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတာမကိုက်ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ တကယ်အပြင်နေထိုင်မှုမှာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဆင်ဆာမရှိသင့်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်က လူတွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ လူတွေကိုသက်ရောက်မှုက Pre Production မှာပဲ အရင်စမ်းသပ်သင့်တယ်။ လိုအပ်တယ်။ ပရိသတ်တွေဆီကိုတိုက်ရိုက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲ အမှန်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့စတူဒီယိုက ဖွင့်ဖို့သိပ်မဝေးတော့ပါဘူး။ သင်္ကြန်အပြီးလောက်ဆို ဖွင့်ဖြစ်တော့မှာပါ။ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။
ပရိသတ်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြဖို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အမြဲတမ်းပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်။
သင်ျကွနျအပွီးမှာ ရုပျရှငျစတူဒီယိုကိုဖှငျ့ဖို့ကြိနျးသနေပွေီဖွဈတဲ့ အကယျဒမီနတေိုး
အနုပညာလောကရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသားတဈဦးဖွဈတဲ့ အကယျဒမီနတေိုးက လကျရှိရိုကျကူးမယျ့ “မဟူရာရုပျရှငျရုံ” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေိုမရိုကျကူးခငျလုပျသငျ့တဲ့ Pre Production ရုပျရှငျစတူဒီယိုဖှငျ့မယျ့အခွအေနမြေားကို တှဆေုံ့မေးမွနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
“မဟူရာရုပျရှငျရုံ” ရုပျရှငျဇာတျကားထဲက ဇာတျကောငျစရိုကျကို ပရိသတျတှအေတှကျ မိတျဆကျပေးပါဦး…
ဒီဇာတျကားထဲမှာ ရုပျရှငျနဲ့ပတျသကျပွီး စတိုရီအရညျအခငျြးရှိတဲ့ လူငယျတဈယောကျရဲ့ဇာတျကောငျစရိုကျနဲ့ပါ။ လကျရှိအသကျထကျကို ၁၀ နှဈလောကျငယျရတဲ့ လူငယျတဈယောကျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ပွောရရငျ ဟော့ဟော့ရမျးရမျးမရှိဘူး။ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အလုပျကို တစိုကျမတျမတျလုပျတတျတဲ့ လူငယျတဈယောကျပါ။
၁၀ နှဈလောကျငယျရမယျ့ဇာတျကောငျဆိုတော့ ပွငျဆငျမှုအပိုငျးကရော…
ပွငျဆငျမှုတှရှေိတယျ။ ဆံပငျပုံစံတှေ ပွောငျးရမယျ။ ၂၀၁၂ ဝနျးကငျြလောကျပုံစံကို ပွနျသှားရမှာပေ့ါ။ အဓိက ဖစျေ့ဘုတျကို မွနျမာပွညျမှာ တှငျတှငျကယျြကယျြမသုံးသေးတဲ့အခြိနျဖွဈမှာပါ။ အဲဒီလိုအခြိနျမှာ ဇာတျကိုတညျထားတဲ့အတှကျ အဲဒီအခြိနျနဲ့လိုကျဖကျမယျ့ဒီဇိုငျးကအစ အားလုံးပွငျဆငျထားပါတယျ။
ရုပျရှငျရိုကျကူးမှုနဲ့ ဗီဒီယိုရိုကျကူးမှုတှမှော ကှာခွားမှုတှရှေိလား…
ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုရိုကျကူးမှု အရမျးကွီးကှာဟနတောမြိုးမရှိပါဘူး။ အဓိကက ဒါရိုကျတာပျေါမှာမူတညျတယျ။ ယိုးဒယားဒါရိုကျတာနဲ့ရိုကျရငျ ယိုးဒယားမုလေးရှိမယျ။ မွနျမာဒါရိုကျတာနဲ့တှရေ့ငျ မွနျမာဆနျတဲ့မုလေးရှိမယျ။ တှေးမိတာတဈခုနဲ့ အတှအေ့ကွုံအရပွောရမယျဆိုရငျ ဘယျဒါရိုကျတာနဲ့ပဲရိုကျရိုကျပါ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယို၊ တီဗီဇာတျလမျးတှဲတှမှော လုပျရတဲ့အိုကျတငျက မတူဘူး။ တူတယျလို့ထငျကွတယျပေ့ါ။ ရုပျရှငျက အိုကျတငျကိုပိုပွီး စိတျထညျ့ပွီးလုပျပွရတယျ။ စိတျထဲမရောကျရငျ လုပျလို့မရဘူး။ ဗီဒီယိုနဲ့ရုပျရှငျ နညျးနညျးတော့ ကှာဟသှားတယျ။ ဒါတှကေ နောကျပိုငျးသတိထားမိတဲ့အခကျြလေးတှပေါ။ ဒါရိုကျတာခိုငျးတဲ့နရောမှာ မူတညျတယျပေ့ါ။
Pre Production လုပျကွတဲ့အပျေါမှာ အဈကိုရဲ့အမွငျက ဘယျလိုရှိလဲ…
အခုရိုကျကူးမယျ့ဇာတျကားရဲ့ ပွငျဆငျမှုအပိုငျးကတော့ Pre Production ပိုငျးကို တဈလလောကျ အခြိနျယူပွီးလုပျရမယျ။ အမှနျကတော့ သုံးလလောကျယူရမှာပါ။ အခုကတော့ Pre Production ကို ၅ ရကျ ၆ ရကျလောကျတော့ ယူနကွေပါပွီ။ ဈေးကှကျထဲမှာ သရုပျဆောငျနကွေတဲ့ သရုပျဆောငျတခြို့လညျး Pre Production ကို လုပျနကွေတာကို တှနေ့ရေပါပွီ။ မလုပျတဲ့သူတခြို့လညျးရှိတယျပေ့ါ။ ပှဲတှကေသလိုပေါ့ ကိုယျပရိသတျတှရှေမှေ့ာကပွမယျ့အရာတှကေို အကွိမျကွိမျဆှေးနှေး၊ အကွိမျကွိမျသရုပျဆောငျကွတာပေ့ါ။ အခြိနျကို အလကားမဖွဈအောငျလုပျရတယျပေ့ါ။ Pre Production တှလေုပျလာကွတဲ့အတှကျလညျး ပိုပွီးတိကသြခြောပွီး ဒါရိုကျတာလိုခငျြတဲ့ပုံစံအတိုငျးပဲ ရတယျ။ ကိုယျလိုခငျြတာနဲ့ ပွနျလညျးညှိလို့ရမယျပေ့ါ။ အဲဒီလိုလေးတှေ လုပျလာမယျဆိုရငျတော့ ၂၀၁၈ က ၂၀၁၉ အတှကျ သခြောတဲ့ ပိုကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျကားတှထှေကျလာမှာပါ။ Pre Production ကတော့ ကြှနျတျောတို့စပွီး လုပျခဲ့တယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ နောကျတဈခုက အရငျကတညျးက Pre Production ကိုပေးတယျ။ ဖလငျခတျေကတညျးကပေ့ါ။ အဲဒီလိုတှရေိုကျလာခဲ့လို့လညျး ထှကျလာတဲ့ဇာတျကောငျတှကေ ကောငျးတယျ။ ကြှနျတျောအနနေဲ့က လှနျခဲ့တဲ့ ၆၊ ၇နှဈလောကျကတညျးက Pre Production တှနေဲ့ ယဉျပါးပွီးသား။ ဗီဒိယိုရဲ့အကငျြ့တှရှေိနသေေးတဲ့ တခြို့သရုပျဆောငျတှလေညျးရှိတယျ။ မလိုဘူးလို့ ထငျတာပေ့ါ။ အဓိကပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားမယျဆိုရငျ ပရိသတျတှဆေီက အသံမြားမြားထှကျမှရမယျ။ Pre Production လုပျလို့မရတဲ့ ဇာတျကားဆိုတာမြိုးမရှိဘူး။ လုပျစရာမလိုဘူးဆိုတာလညျး မရှိဘူးပေ့ါ။ အရှမှေ့ာရိုကျခဲ့တဲ့ “တာတကွေီး” မှာလညျး အဝတျအစားတှကေ ရိုကျခါနီးမှပွငျဆငျတာ ဝတျတာမဟုတျဘူး။ ရိုကျမယျ့ဇာတျဝငျခနျးတှေ၊ ပွငျဆငျမှုတှကေို ကွိုမလုပျထားဘူးဆိုရငျ ပရိသတျတှရှေကေို့ သသေသေပျသပျနဲ့ ရောကျလာမှာမဟုတျပါဘူး။ Pre Production နဲ့သှားမယျဆိုရငျတော့ပိုကောငျးတဲ့ဇာတျကောငျတဈခု ပရိသတျတှဆေီကိုရောကျမယျပေ့ါ။ Pre Production လုပျရငျ ပိုကောငျးနတောသိပမေယျ့လညျး တခြို့လိုကျမလုပျသေးတဲ့ ဒါရိုကျတာတှေ၊ သရုပျဆောငျတှရှေိပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ Pre Production ကို လုပျကွဖို့ ကြှနျတျောကတိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ရှဆေ့ကျပွီးတော့ အလုပျတဈခုကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျလုပျရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိသတျအပျေါမှာ သသေခြောခြာလေး စတေနာထားစခေငျြတယျ။
ဆငျဆာကငျးလှတျခွငျး၊ ဆငျဆာရှိခွငျးအပျေါမှာ သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ ဘယျလိုထငျမွငျခကျြပေးခငျြလဲ….
ဆငျဆာဆိုတာက လှတျလပျမှုအပျေါမှာ အသိတဈခုပေါ့။ ဆငျဆာပေးခွငျးမပေးခွငျးမှာ အနုပညာကိုဖနျတီးတဲ့သူတှရေဲ့စိတျမှာ လုပျခငျြတာနဲ့ မလုပျခငျြတာပဲကှာတယျ။ ဇာတျညှနျးတဈခုကို လူတနျးစားမြိုးစုံကိုဖတျခိုငျးမယျ။ မိနျးကလေး၊ ယောကျြားလေး၊ ကလေးအမြိုးစုံပေ့ါ အဲဒီမှာ ဘယျလိုတုနျ့ပွနျလာမလဲ။ အဓိကက အဲဒါပါပဲ။ အဲဒီလိုဖတျကွညျ့လို့ အားလုံးကလကျခံတယျ။ အဲဒီမှာမှ ဆငျဆာကဖွတျတယျဆိုရငျတော့ နညျးနညျးလေးလူ့ပတျဝနျးကငျြနဲ့ သဟဇာတာမကိုကျဘူးလို့ ပွောလို့ရတယျ။ တကယျအပွငျနထေိုငျမှုမှာရှိတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ဘာမှမဖွဈဘူး၊ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကို အနှောငျ့အယှကျမရှိဘူးဆိုရငျတော့ ဆငျဆာမရှိသငျ့ဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရုပျရှငျက လူတှကေိုကိုယျစားပွုတယျ။ လူတှကေိုသကျရောကျမှုက Pre Production မှာပဲ အရငျစမျးသပျသငျ့တယျ။ လိုအပျတယျ။ ပရိသတျတှဆေီကိုတိုကျရိုကျရောကျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လူအမြားရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကိုပဲ အမှနျလို့ထငျပါတယျ။
ကြှနျတျောရဲ့စတူဒီယိုက ဖှငျ့ဖို့သိပျမဝေးတော့ပါဘူး။ သင်ျကွနျအပွီးလောကျဆို ဖှငျ့ဖွဈတော့မှာပါ။ သိပျမလိုတော့ပါဘူး။
ပရိသတျတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးအားပေးကွဖို့လညျး ပွောခငျြပါတယျ။ အကောငျးဆုံး အမွဲတမျးပရိသတျတှအေတှကျ ကွိုးစားနပေါတယျ။